Sitolo sekudla lokuphekiwe Irish futhi Whisky Irish - IrishWhiskey.com
Kuvele Irish Whiskey Idea for ithilomu Irish. Kuvele Irish Whiskey ohlwini ihlanganiswe ngokucophelela njengoba ohlwini Wine?
Vele ngesonto eledlule, Ngase udla ngaphandle kwesinye ozithandayo Irish Midlands ithilomu yami.
Bengingekho lapho izinyanga ezimbalwa, ngakho mina lalibheke phambili imenyu newayini uhlu lwabo bathuthukisa ngokuphelele ukuthi abangane bami, abahlala eduze yokudlela, wayekade ukuvala umlomo ngayo.
Bengingekho ukuba kwamdumaza. I ukudla isevisi babe emihle uhlu iwayini, okuyinto Ngiyaqonda ukuthi ihlanganiswe omkhulu Wines Direct e Mullingar, ngabhekana iwayini kumnandi ngesikhathi emangalisayo yokudlela amanani e amabhodlela, amabhodlela kwesigamu nangesandla ingilazi. Mina amasampuli iwayini ezimbili (omunye endleleni ngayinye) futhi scrounged ukunambitheka esibambisene yami owayeseqenjini iwayini ezahlukene. Bonke lapho bajabula oncomekayo ngempela. Ngakho okuhle ukuthi kwangithinta ukuthi kumelwe ayeke ukuthenga overpriced futhi phezu silinganisele esitolo iwayini futhi usethe i-akhawunti enhle Irish iwayini yomthengisi!
Ngakho, uma namanje nami ... inkampani Omkhulu, yokudlela omkhulu, ukudla okukhulu, iwayini enkulu futhi abasebenzi enkulu. Zonke engangikudinga manje kwaba nogologo kumnandi ngempela ngempela nyá a yokudlela emangalisayo umuzwa ngesitayela.
Ngabuza Shona Waiter ..........(ngubani Ngazi kahle) nowayekhona umthombo omkhulu kolwazi kanye nezeluleko babantu abasohlwini lwabo iwayini .... Ingabe whiskey?
mina uthi, lokho onayo?
uthi, Ngicabanga ukuthi kufanele Bushmills noPaddy kodwa mina ngizobe hlola. Emuva yeza ukuba baqinisekise ukuthi kwadingeka Black Bush (yamukeleka) noPaddy okuyinto wavuma yena, bona lugcinwa Coffees Irish.
Ngakho! (futhi lokhu kwaba Eureka isikhashana sami ngenxa Irish Indawo yokudlela Imboni), kungani restaurateurs kuleli enjalo enamandla futhi ekhula Irish Whiskey Industry sinake kakhulu uhlu iwayini nge French, Spanish, iwayini Italian futhi INguqulo Yezwe Elisha, kodwa akhokhe ithokheni debe a ayahambelana Irish Whiskey ohlwini.
Isiphakamiso My ayengazithola naka ukuthatha up, ukuthi ngangibona ahlanganise Irish Whiskey ohlwini elula ngabo ukuze bathole kusuka umphakeli zabo zendawo ababengakholwa abese ukushaja ngentengo fair kodwa aphambili.
Ukuze emhlabeni € 300, i yokudlela Irish, ingase ibe Redbreast, green Spot, Connemara, Teeling, Bushmills (Emnyama noma Malt) kanye Amandla Johns Lane, konke okuzokwenza ukuthengisa kahle. Phonsa in ezimbalwa ezinhle nogologo inkomishi lendze nezibuko zamehlo nosing futhi uke baletha eduze kwakho yokudlela isipiliyoni ezingeni elisha. Ungase wenezele ngisho ezinye nice kodwa ezingabizi izinga Scotch nogologo ezifana Laphroaig noma Glenlivet.
Laba yibo bonke whiskeys ukuthi punter isilinganiso angase ongajwayele ukuthenga nge ibhodlela. Bayoba Nokho aphathe ngokwabo ukuba into ekhethekile lapho udla endaweni ethile ekhethekile. Quality ethengisa futhi usuthisa izinga!
Bengilokhu ngiwuhlobo linombono wokuthi isikhathi ngemva inkambo main kulapho cishe ukukholisa amakhasimende wakho ukuze ubuyele. Kuvame zokugcina "uzizwe okuhle 'amaminithi kusihlwa lapho lusala inkumbulo.
Midlands zokudlela angase angakhuthazi whiskeys zendawo ezifana Kilbeggan, Lockes Distillery futhi Tullamore D.E.W..
izivakashi, ke uzonginika ngezinga elikhulu zekhwalithi yokudlela isipiliyoni sabo Irish. I ukugembula iningi labo ukuthenga ibhodlela yini ababengayisebenzisa yokudlela yakho esikhumulweni sezindiza futhi kangcono namanje, bayofaka abangane babo ukuze Whisky Irish lapho beningenisa ukuthi ikhaya ibhodlela.
Uma kukhona yokudlela Irish ungathanda ukuba bathathe inselele yami, Ngingathanda bayokujabulela ukuwasiza wokubhala ezinhle Irish uhlu Whisky nge umphakeli wawo kanye € 250 izimali ifaniswe. Ngithumelele i-imeyili ku-Stuart (ngesikhathi) IrishWhiskey.com noma unginike ngokukhamuluka ku 087 2 111 222 ngengxoxo okusheshayo uma nesithakazelo!
Vele netomu lami elincane Imboni Irish Indawo yokudlela!